Plasma 5.21 yasvika neshanduko shanduko uye nyowani Kickoff | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi Kukadzi 16 izuva rakakosha kune vashandisi veKDE, ini pachangu ndakabatanidzwa. Iyo K chirongwa chakatangwa Plasma 5.21, yazvino makuru ekuvandudza kune yako graphical nharaunda. Iyo yekutanga vhezheni kana zero poindi, zvinoreva kuti inouya nezvakawanda zvitsva, asi isu tinogona zvakare kutarisira kuti iunze mabugs ayo achafanirwa kugadziriswa mumatanho mashanu ekuvandudza ayo akarongwa kwemwedzi mishoma inotevera. Yokutanga (5.21.1) ichasvika kutanga svondo rinouya.
Imwe yedzakakurumbira misiyano yeavo vanosvika nePlasma 5.21 inogona kunyatso kuoneka mumusoro wekutora, inova iyo kubatwa kweiyo chinyorwa chekuburitsa: iyo yekutanga application, inozivikanwawo se Kickoff, yachinja, ikozvino kuve nyore kuwana maapplication uye nekuawana kana tichifanira kuvatsvaga. Pazasi iwe une runyorwa rweakanyanya kunaka nhau dzakasvika neiyo yazvino vhezheni yeKDE graphical nharaunda.
Pfungwa dzePlasma 5.21
Dzese shanduko dzataurwa pazasi dzaive dzatove kuwanikwa mu beta iyo yakatangwa masvondo matatu apfuura, asi KDE yakazvitaura zvakare:
Mutsva wekushandisa application. Iye zvino zviri kukurumidza kuwana uye kuwana kunyorera. Zvakare, inotsigira mimwe mitauro. Izvo zvakakosha kutaura kuti, kana tisingazvifarire, vhezheni yapfuura inowanikwa pa store.kde.org.
Kunatsiridza mumusoro wenyaya wekushandisa. Iyo theme yekusarudzika yakachinja iyo color scheme uye zvese zvinowirirana.
Nyowani Breeze Twilight, chimwe chinhu chinoyeuchidza yemusoro wakasanganiswa uyo Ubuntu watove unosanganisira: rima tema renharaunda, asi mashandisiro mune yavo yakajeka vhezheni.
Plasma SystemMonitor inotsiva KSysGuard.
KWin inoshanda zvakanyanya paWayland.
Peji nyowani yekugadzirisa yePlasma firewall muSystem Preferences.
Sarudzo dzeSystem dzakavandudza mufananidzo wemazhinji emapeji ayo.
Kunatsiridzwa mune akawanda maApplet, senge mutambi wemimhanzi kana kuti isu tava kukwanisa kubata odhiyo yekuisa / kuburitsa kubva kune yekunzwika applet iri mune system tireyi.
KDE ine yakatangwa zviri pamutemo Plasma 5.21, asi izvi zvinoreva kuti kodhi yayo yatowanikwa. Mumaawa mashoma anotevera ichave iri kuuya ku KDE neon, uyezve kune kumwe kugovera. Avo vedu vari kushandisa iyo KDE Backports repository, iyo Kubuntu vashandisi vanowanzoita, havazoone chero chinhu kubva kuPlasma 5.21 kusvika Kubvumbi, apo Kubuntu 21.04 Hirsute Hippo inosunungurwa. Avo vedu vangangozozviona kare ndivo vanozove nePlasma yakaiswa nemaoko muRolling Release kugovera. Chero zvazvingaitika, Plasma 5.21 yatove pamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Plasma 5.21 iri pano, iine nyowani maficha kubva kune yekushandisa kuvhura kune interface tweaks
KDE yakapfuura angangoita ese desktops, kwete chete Linux mune yayo aesthetics uye mashandiro ayo, asi akawanda akakosha mibvunzo anoramba hafu yapera: Baloo inoshanda painoda uye yakaipa; Akonadi, isu tese hatisati taziva kuti ndeyei, nekuti uchaenda kunotsvaga muKmail kuti uwane mameseji mumaemail uye ichawana zvaunoda, kunyangwe meseji idzo HAZVI uine chinyorwa chawakatsvaga; hatisati tine chinyorwa chekufungidzira, apo nhare mbozha dzaive nacho kubva muzana ramakore rapfuura; Wayland haishandisike muhupenyu chaihwo, uye chirongwa ichi chave mukuvandudzwa kweanenge makore gumi neshanu, zvakadaro ... Asi hei, chimiro chiri kuwedzera kunaka uye hunyanzvi ... handisi kuti kuva nharaunda inonakidza hakuiti nani ruzivo rwemushandisi, asi mukaka, kuti pane kusakwana kusati kwagadziriswa kwemakore gumi!
Chikwata che KDE chinofanirwa kufungisisa kukoshesa izvo zvakakosha uye kubvisa izvo zviri zvechipiri, nekuti kana zvisiri, "gore reLinux desktop" harisi kuzosvika kunyangwe muzana ramakore XXII.
Fedora Kinoite, anotevera Spin uyo anosvika naFedora 35 uye ichave yakavakirwa paSilverblue